‘मेरो ए’क्सको छ’म्मा २’ पनि आउने : सिर्जना खत्री ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 21, 2020 AdminLeaveaComment on ‘मेरो ए’क्सको छ’म्मा २’ पनि आउने : सिर्जना खत्री ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नौटंकी माया , डबल माया र पछील्लो चोटि एक्सको छम्मा गीतबाट चर्चित सिर्जना खत्री ‘हाउडे माया’ नयाँ गीतहरुको रेकर्डिङमा ब्यस्त छिन । बालक देखी बुढासम्म हरेकको मुखमा झुन्डिन सफल, टिकटकमा पनि भाईरल गीतकी गायिका सिर्जना खत्री ‘हाउडे माया ‘लाई अहिले नयाँ गीतहरुको अफर पनि धेरै नै आइरहेको छ । पहिला नै नौटन्की माया र डबल मायाजस्तो हिट गीत दिइसकेकी सिर्जनालाई धेरैले भने ए’क्सको छ’म्मा गीतबाट चिने ।
लकडाउनमा बनाइएको गीत सुरुमा एरेन्जमा दिंदा र रेकर्ड गर्दा नै सिर्जनालाई अलि अप्ठे’रो लागिरहेको थियो । भिडियो बनिसकेपछी भने केही आशा पलायो । गीत युट्युबमा अपलोड भएको केही दिन भ्यू राम्रो गएन , प्रतिकृयाहरु पनि मिस्रित आए । गीत सार्वजनिक भएको ४-५ दिनपछी भने गीत ट्रेन्डीङमा जान पनि सफल भयो । एक्कासी भ्यू पनि राम्रो गयो र बिस्तारै टिकटक लगायत सबैतिर भाईरल नै भयो । अत्याधिक ट्रोलहरु पनि बने ।
पुन्य गौतम लगायतका केही ब्यक्तिहरुले सुरुवाती दिनमा आ’लोचना पनि गरे , पछी त्यही ब्यक्तिहरुले गीत र गायिकालाई सपोर्ट पनि गरे । गीतलाई लिएर आएका केही न’कारात्मक कमेन्टहरुले एक समय गीत डिलिट गर्ने मनसायमा समेत गायिका सिर्जना पुगिसकेकी थिइन । गीतले पाएको सफलता देख्दा यदी अहिले बिभिन्न महोत्सव र कार्यक्रम हुन्थ्यो भने सिर्जनालाई भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । हुन त सिर्जनाले बिगतमा लोकदोहोरी , तीजका गीतहरुमा पनि स्वर दिइसकेकी छिन तर उनलाई बढी दर्शकले चाँही र्याप गायिका भनेर चिने ।
र्यापलाई बुझेर र पूर्णतया र्याप शैलिमा भने आफुले नगाएको सिर्जना बताउछिन । अलि सिकेर र बुझेर गाएको भए गीत अझ राम्रो हुन सक्ने उनको धारणा छ । मिस्टर आरजे सँगको सहकार्य उनलाई सजिलो लाग्छ अनि फापेको पनि छ । सुरुमा सुनाउँदा एक्सको छ’म्मा गीत भने आरजेलाई मन परेको थिएन पछी कुरा मिल्यो र यस गीतमा पनि सहकार्य भयो । धेरैले यो गीतको दोस्रो भाग पनि खोजिरहेका छन ।
भोलिका दिनमा यो गीतको दोस्रो भाग पनि आउन सक्ने सिर्जना बताउँछिन । सिर्जना आफ्नै पनि प्रोजेक्ट र बाहिरका केही प्रोजेक्टहरुका साथ छिट्टैनै आउने तयारीमा छिन । उनै सिर्जना खत्री ‘हाउडे माया’ सँग गीत रेकर्डिङको बिचमा गरिएको छोटो मिठो कुराकानीः
खाडी मुलुकमा श्रम गरिरहेका श्रीमानको मोबाइलमा आफ्नै श्रीमतीको परपुरुषसंगको न’ग्न तस्विर आएपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)